လိုင်စင်မဲ့ကား တားမြစ်မိန့် ပြည်ထဲရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်လော (Daily, Vol-6/No-66)
လိုင်စင်မဲ့ကားများ အသုံးပြုခွင့် မပြုတော့ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုနေသောကားများကို တားမြစ်လိုက်ခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်သွားစေခဲ့သည်။
စင်စစ်အားဖြင့် လိုင်စင်မဲ့ကားဟုဆိုသည်နှင့် ဥပဒေအရ မူလကပင် မည်သည့်နေရာတွင်မျှ အသုံးပြုခွင့်ပြုစရာ အကြောင်းမရှိပေ။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့အသီးသီးတွင် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ အားလုံးနီးပါး ဈေးသက်သာသော လိုင်စင်မဲ့ကားများကိုသာ အသုံးပြုနေခြင်းမှာ မူလကပင် ဥပဒေချိုးဖောက်ခွင့်ပြုထားသကဲသို့ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ထိုသို့ ချိုးဖောက်ခွင့်ပြုထားခဲ့ရာမှ ရုတ်ခြည်းဆိုသလို တားမြစ်ပိတ်ပင်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းမှာ နားလည်ရခက်သွားစေခဲ့သည်။ ပိုနားလည်ရခက်စေသည်မှာ အဆိုပါအမိန့်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခြင်း (ဝါ) ယင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး သို့မဟုတ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းကသာ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရားဥပဒေ၏ မူလသဘာဝသည် ကန့်သတ်ချက်၊ ခြွင်းချက်မရှိ မည်သူ့ကိုမဆို၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို တစ်သမတ်တည်းရှိကာ သက်ရောက်မှုရှိရမည် ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေကို သိသိသာသာတစ်မျိုး၊ မသိမသာ တစ်မျိုး ကျော်လွန်၊ ချိုးဖောက်နေသော ဖြစ်ရပ်များ နယ်ပယ်တိုင်းတွင်ရှိနေသည်။
ဤနေရာတွင် ကားနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကပြောရလျှင် ရန်ကုန်ကဲ့သို့ မြို့တော်မျိုးတွင်ပင် မိမိဘာသာ စိတ်ကြိုက်ပုံစံ တပ်ထားသော နံပါတ်ပြားများ တပ်စီးနေသော ကားများ၊ နံပါတ်ပြားမပါဘဲ မောင်းနှင်နေသောကားများ၊ လိုင်စင်မဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားများ၊ ယာဉ်စည်းကမ်းကို နည်းလမ်းမျိုးစုံ ချိုးဖောက်နေသော ဌာနဆိုင်ရာ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ကိုယ်ပိုင်၊ အငှားယာဉ်ငယ်များ ရှိနေလင့်ကစား စနစ်တကျ စည်းကမ်း ကြပ်မတ် ထိန်းကွပ်၊ နှိမ်နင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိပေ။
အခါအားလျော်စွာ ရှောင်တခင် စစ်ဆေး၊ ဖမ်းဆီးခြင်းမှတစ်ပါး အခြားအချိန်များတွင် လွတ်လပ်စွာ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေ ချိုးဖောက်ခွင့်ပြုထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ယနေ့အချိန်အထိ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် တရုတ်နံပါတ်၊ ထိုင်းနံပါတ်ဖြင့် စီးနင်းနေသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ တွေ့မြင်နေရခြင်းမှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှုက လိုလျှင်လိုသလို၊ မလိုလျှင် မလိုသလို ကွက်ကျားမိုးကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေသည်။
စီးပွားရေးအရ အသုံးပြုနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးနှင့် နာရေးကိစ္စများတွင် အခမဲ့ ကူညီပေးနေသော လူမှုရေးအသင်းမှ ကားများကိုသာ လိုင်စင်မဲ့ကားများ ဖြစ်နေသောကြောင့် အရေးယူရန် အမိန့်ထုတ်ခြင်းမှာ တရားမျှတမှု ရှိ၊ မရှိ ဥပဒေစိုးမိုးမှုက အညီအမျှ ဖြစ်၊ မဖြစ် စဉ်းစားသင့်လှသည်။
မူလကပင် လိုင်စင်မဲ့ သုံးခွင့်မပြုဘဲ လိုင်စင်ရရှိရန် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ သို့မဟုတ် အခမဲ့နီးပါးနှုန်းထားဖြင့် လိုင်စင်ရရှိစေရန် ခွင့်ပြုပေးသင့်သော်ငြား လိုင်စင်မဲ့ကားများ အသုံးပြုခွင့် တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေခဲ့ပြီးမှ တစ်ရေးနိုးမှ ထဖမ်းသည့် ပုံစံဖြစ်နေခြင်းမှာ သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ပါ၏လောဟု သံသယဖြင့် စောကြောစရာ ဖြစ်သွားစေခဲ့သည်။
ထိုသံသယကို ပိုကြီးသွားစေသည်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အဓိက သက်ဆိုင်သော က. ည. န ခေါ် ကုန်းလမ်းညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနကသာ အထက်ပါ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ရမည့်အစား ပြည်ထဲရေး လက်အောက်ရှိ မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ထိုကားများ တားမြစ်ခွင့် လွှဲအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်လျှင် အစိုးရနှစ်ခု ရှိနေသလောဟု သံသယပွားစရာ အငြင်းပွားဖွယ် ခြေရာ၊ လက်ရာများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တိုးပွားလာနေချိန်မျိုးတွင် ပြည်ထဲရေးသည် အစိုးရ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိကြောင်း သက်သေပြသည့်လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်လာပါက အများအကျိုး ဆောင်ရွက်နေသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် များစွာ အကုသိုလ်ကြီးကြောင်း သိစေလိုရင်းဖြစ်သည်။